Page3of 3	41. သူရဦးရွှေမန်း KNU ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဆွေးနွေး	(2016)
... မနေ့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ နှစ်ဖက် တပ်နေရာချထားရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ...	Created on 26 November 2016	42. အာရှနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာအစိုးရကို ဆန္ဒပြ	(2016)
... ထက် နိုင်ငံရေးနဲ့ အာဏာကို ဦးစားပေးလိုက်ပြီ၊ အရင်ကလို သတ္တိမရှိတော့ဖူးလို့ပြောကြောင်း ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကာလတဲ့ AFP သတင်းမှာတော့ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဟာဘီဘာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးက သူနဲ့ သူ့ညီမအပါအဝင် ရွာကမိန်းကလေးတွေ ...	Created on 26 November 2016	43. လက်ယာစွန်းပါတီတွေ ဥရောပမှာ အလားအလာကောင်း	(2016)
အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump အနိုင်ရတာကို ကမ္ဘာတလွှား လက်ယာစွန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေက ကြိုဆိုကြပြီး ကြိုဆိုသူ အများဆုံးရှိတဲ့ ဥရောပမှာဆိုရင် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျရင် လက်ရှိအာဏာရပါတီတွေအဖို့ ...	Created on 25 November 2016	44. ရှမ်းပြည်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး	(2016)
... နိုင်ငံရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး သုံးသပ်သူတွေရဲ့ သဘောထား အမြင်တွေကို မမေခ ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒီသီတင်းပတ်ထဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ ...	Created on 24 November 2016	45. အမေရိကန်နိုင်ငံရေးနဲ့ လူနည်းစုများ	(2016)
အမေရိကန်တဝှမ်း ကျေးဇူးတော်နေ့အခါသမယ မိသားစု ညစာစားပွဲတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားစရာ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူနည်းစု လူမျိုးစုတွေအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ...	Created on 24 November 2016	46. နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် တည်ငြိမ်ရေး နည်းလမ်းသစ်နဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ တရုတ်ကြိုးပမ်း	(2016)
"တရုတ်ရဲ့ အကူအညီ၊ ပါပါ-မပါပါ သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာဗဟိုအစိုးရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကျေနပ်ကြပါဘူး။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် သူတို့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေ၊ စိတ်တိုင်းမကျတာတွေ ရှိပါတယ်။"FG_AUTHORS: ...	Created on 24 November 2016	47. မြန်မာစစ်တပ်အပစ်ရပ်ရင် တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင်ကလည်း ချက်ချင်းအပစ်ရပ်မယ်ဟု TNLA ပြော	(2016)
... မူတည်နေပါတယ်။ အစိုးရက လမ်းကြောင်းမှန်တည့်ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်၊"FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... “တပ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ သူက ဒီစစ်ပွဲရပ်ဖို့လိုတယ် စကားပြောကြရအောင် ...	Created on 22 November 2016	48. ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအရေး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် စိုးရိမ်ဖွယ်	(2016)
... နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသွားနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ကချင်၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်၊ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကို တိုုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ် ...	Created on 21 November 2016	49. ဖတ်ခွင့်မရတဲ့စာတမ်းရှင်တို့ ရဲ့ချေပချက်	(2016)
NLD အစိုးရလက်ထက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီးပြီး ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမယ့် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် တင်သွင်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ စာတမ်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 18 November 2016	50. ဖတ်ခွင့်မရတဲ့စာတမ်းရှင်တို့ ရဲ့ချေပချက်	(2016)
NLD အစိုးရလက်ထက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီးပြီး ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပမယ့် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် တင်သွင်းထားတဲ့ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ စာတမ်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 18 November 2016	StartPrev123NextEnd
ဆေးပို့ပေးမည့်ယာဉ်	You are here: mm.myanmars.net